FAALLO XIISO BADAN:- Bilaw Maahan Sheekadu ((Al-Saaciduun Bil xaqi الصادعون_بالحق)) | Wararka Jubbaland
FAALLO XIISO BADAN:- Bilaw Maahan Sheekadu ((Al-Saaciduun Bil xaqi الصادعون_بالحق))
Waxaa jiray nin wadaad oo katirsanaan jiray Culumada Suufiyada, kadib waxuu ku biiray wadaadkii Al-Itixaad asagoo sheegay inay yihiin culumada maanta jirta Kuwa ugu saxan, dabadeed waxuu guursaday inan iyaduna katirsan xisbigaan cusub ee uu ku biiray hadda, aad bayna ugarab istaagtay runtii, maadama ay xoogaa ugasoo yara horeesay. Mudo ayaa farxad lagu wada noolaa, salaadana isku dhan loo tukanayay, waxayna isu dhalen Sagal caruura.
Hadaba waxaa dhacday subaxdii dambe in marwadii reerku lasoo baxday dabeecado cusub oo aan horay loogu aqoon, waxay bilawday inay ka hagoogto odaygedii, inay gogoshii jiifka uga tagtay, iyo inay caadaysato hadalo ay kamid yihiin: Gaal baa tahay oo xerada kuma jirtid, soo Islaam hada rabto inaan gogosha kusoo noqdo iyo erey hadalo kaloo badan.
Wadadaadkii waxaa ku dhacay jahwareer xaafadeed, waxuuna garan waayay meeluu ugu hagaago waxaan socda iyo cidda reerka udaba martay, haduu isku dayay inuu wax ka ogaado waxa islaantiisii daarayna waxba waa uga bixi waayeen. Dantu waxay kaliftay markaan inuu helo cid ka caawisa, kadibna waxuu utagay wadaad ay saaxiibo yihiin, isku dugsi Quraana wada ahaan jireen oo Suufi ah, guri Kasii jeeda xaafadiisana dagan, waxuu uga dhacay waxii dhacay, waxuuna uga waramay siduu uga baqayo inay ubadka ka fitnayso, waxuu hadal kusoo xiray Sheekhaw howsha ka odoyee, Sheekiina waa ka aqbalay.
Subixii dambe markay ubadkii kala direen ayuu Sheekhii ugu yimid guriga, gogol loosii diyaariyay ayuuna salka la helay, deedna waxuu uyeeray labadii waalid ee isqabtay, mid walba markiis ayuu hadalkii siiyay suu wax uga dhaho nuxurka waxuu aaminsan yahay, mid kastana waa kan kalmado kusoo uruuriyay waxii uu aaminsanaa.
Markaan sheekhii wuu fahmay halkay salaaddu iska qaban la’dahay, way usoo baxday inay gabadhu qaadatay caqiiqadii takfiirka halka odaygu xisbigiisii hore ku
Adkaystay.Waxuu yiri Ma imaqlaysay Cumaraw? Suu yiri haa Shiikh, Suu ugu warceliyay, dhib wayni majiro kaliya casharkaad horay udhigateen unbay cashar kale ku darsatay, Cumar oon wali fahmin nuxurka hadalka Sheekha baa markale yiri iijilci Shiikhaw.
Deedna waxuu yiri Cumaraw waa inagii
☆Isku jeeska ahaan jirnay bari ☆Dugsiilayda wada ahayn
☆Wada digriyi jirnay
☆Wada ducaysan jirnay
☆Khilaaf la,aana kuwada noolay
☆Dadkuna isku dhan uwada socday
Deedna waa adigii marqura isbadalee subax nayiri xaqiiba haddaan fahmay, oo baadil baan kujiray aawal idinkuna wali kujirtaan, sidaasna nooga dhaqaaqay. Marka mudane marwadaaduna darajaas hore way kula qaadatay barigii, hadana Darajadii labaad bay un bay xiratay.
Xalka Reerka hadaad iwaydiisayna waa laba un midkood oo qura:-
☆ Inay darajadii labaad ee ay qaadatay kasoo dagto, reerkedana farxad kula
Noolaato Marwadu. ☆ Ama inaad adigu darajadaas labaad laqaadato reerkana halkaas urarto.
Haatan waxaan uga golleeyahay Al-Saaciduuna Maahan Kooxdii ugu horeesay ee dhahda anagaa wadadii Saxda ahayd ku taagan ee kusoo leexda, mana noqon doonto kooxdii ugu dambeesay, oo uu intuu suubanaheenu sheegay intay kasoo idlaanayso kooxuhu waa soconayaan.
Waxaan hadaba bulshada guud ahaan ugu baaqayaa ina nabad lagu wada noolaado, si cilmi iyo caqli ku dhisana loo wada doodo, diintana la barto waayo xarig iyo dagaal waxba ma hagaajiyaanee waxbay haleeyaan.
Waxaan Qalinka kusoo xirayaa walaalayaal:
Soddon sano ku dhawaad waxaan kujirnay dagaal aan jid iyo jiho toona lahayn oo ku salaysan iskooxaysi qabiileed. Ma qiyaasi kartaan intuu socon karo dagaal kusaabsan iskooxaysi caqiido. Hadaba danteenu waxay kujirtaa inaan diinta barano saan uga badbaadno fitanta socota, nabadna kuwada noolaado, sidoo kalena bilawno doodo culimadu wax isku dhaafsato oo si nabad iyo xushmad leh uqabsooma.
Wabillaahi Towfiiq Wasalaamu Calaykum
W.Q. Cabdifataax Xasan Cirguje